people Nepal » अपमानको प्रवृत्ति अपमानको प्रवृत्ति – people Nepal
Posted on April 11, 2021 by Tara Nidhi
विरोध त्यसको हुन्छ, जसले केही नयाँ गर्न प्रयास गर्छ, क्रमभङ्गताको आरम्भ गर्छ
चैत्र २९, २०७७ आईतवार
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी)बाट निलम्बित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चैत २७ मा विराटनगरमा भन्नुभयो– केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नेहरू दास हुन् । त्यसकारण समानान्तर कमिटी गठनका लागि विराटनगर आयौँ । विधानविपरीत काम गर्नेलाई साथ र समर्थन दिने दास हुन् । हामी दास होइनौँ ।’
ओली प्रधानमन्त्री भएयता यस्तो भाषा माधवकुमार नेपालले धेरैपटक प्रयोग गर्नुभयो । प्रचण्डसँग गठबन्धन बनेपछि त नेपालमात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यो आसय फरक भाषामा प्रयोग गर्नुभयो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउन माधव र प्रचण्डले सकेकाजति सबै अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो तर जब सक्नुभएन, त्यसपछि ओलीलाई मात्र होइन, उहाँको पक्षमा लागेका सबैमाथि आक्षेप लगाइरहनुभएको छ ।
सत्तारूढ पार्टीकै वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न शब्दकोशकै सहारा लिएपछि प्रतिपक्षी सांसदबाट स्वाभाविक रूपमा अनुदारता प्रदर्शन हुन्छ नै । प्रतिनिधिसभाको चैत २६ को बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘दास’ शब्दको प्रयोग गर्नुभएन, त्यसको ठाउँमा ओली समर्थकलाई उहाँले ‘हुक्के, चिलिमे र बैठके’ शब्दको प्रयोग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको जारी कार्यकालमा भएका विकास निर्माण र विकास निर्माणको सोचमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा आफू प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
सांसद गगनलाई समकालीन नेता सांसद महेश बस्नेतले एकछिनपछि जवाफ फर्काउनुभयो । विकासमाथि स्वस्थ बहस हुनु सकारात्मक नै हो । तर, विकासबाट अत्तालिएर त्यसलाई पूर्वाग्रहमा परिणत गरी बहस उठाउनुचाहिँ नकारात्मक हो । नागरिकले देखेको विकास केही होइन भन्न मिल्छ र ?
ओली सरकारका पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले उहाँकै भाषाको ‘प्रतिगमन’विरुद्ध प्रदर्शनीमार्गमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकलाई ‘साइबर स्याल’को वाक्यांश प्रयोग गर्नुभएको थियो । उहाँले सायद ओलीको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने युवाको समूह ‘साइबर सेना’लाई ‘साइबर स्याल’मा रूपान्तरण गर्नुभयो । उहाँको त्यसबेलाको आसय ओलीको पक्षमा साइबर स्यालबाहेक कोही पनि नरहेको भन्ने थियो । जबकि त्यसबेला पनि ओलीका सभामा तुलनात्मक उपस्थिति बाक्लो थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका समर्थकलाई आरोपित गर्नुभएको छ ।
नेताका शब्द र वाणीले वजन पाउँछन् तर उहाँहरूका अभिव्यक्तिप्रति कोही पनि गम्भीर भएनन् । ओलीलाई हटाउने सर्तमा आफ्नो राजनीतिक जीवनसमेत दाउमा लगाउन विद्वान् बाबुराम तयार देखिनुहुन्छ, उहाँका ट्वीट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरूप्रति त्यति व्यक्तिगत टिप्पणी गरेको देखिँदैन । उहाँले चैत २७ मा ‘ओली लात खाएपछि बल्ल थाहा पाए र सहयोग माग्न आए’ भन्दै प्रचण्डमाथि कटाक्ष गर्नुभयो । यो पनि प्रचण्डले रात दिन ओली हटाउन किचकिच गरेपछि प्रतिक्रियास्वरूप आएको अभिव्यक्तिमात्र हो । प्रसङ्ग भने २०७४ को निर्वाचन परिणामपछि प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्नुभएका प्रचण्डले देउवासँग गरेको विमर्शको थियो । निर्वाचनमा सहकार्य गरेर आएको परिणामपछि प्रचण्ड पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्नथ्यो, बाध्य भएर स्वीकार्नुभएको थियो । त्यो पनि हैसियतअनुसार, सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य लिखतपछि, जो पछि सार्वजनिक भयो नै ।
राष्ट्रिय राजनीति, गठबन्धन राजनीति, पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा उतारचढाव आउँछन् । ती उतारचढाव कसैका लागि अनुकूल र कसैका लागि प्रतिकूल हुन सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा यस्ता अनुकूलन र प्रतिकूलता देखिन्छन् । सत्तालक्षित गठबन्धन राजनीति र अझ एउटा पार्टीभित्रको सत्ता राजनीतिमा आएका छाल बढी अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । किनकि त्यहाँभित्र नेतालाई मान्ने समूह अदलबदल भइरहन्छ । झट्ट हेर्दा, झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा)को सरकार सामान्य बहुमतमा सीमित भयो, पार्टी नै विघटन भएर पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अझ एमालेभित्र माधव नेपालको समूह समानान्तर गतिविधि गर्दै अघि बढिरहेकाले अब नेपालबाट कम्युनिस्ट सकिए भन्ने निष्कर्ष निकालिनेछन् । तर, एउटै विकासक्रम र घटनाले पार्टीकै अस्तित्व सकिँदैन । पार्टीको विस्तार र क्षयीकरण उक्त पार्टीको आन्तरिक विभाजनले मात्र गर्दैन, विपक्षीको प्रभाव र हैसियतले पनि गर्छ । फेरि, अर्कोको कमजोरीको फाइदा उठाउने अवस्था अस्थायी विस्तारको अवस्थामात्र हो । प्रदर्शन गर्ने आफ्नै क्षमता र सामथ्र्य हो ।
मूल्याङ्कन गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि राजनीति प्रतिकूल छ भन्ने देखिन्छ । तर यो त्यस्तो प्रतिकूलता होइन, जो चिर्न नसकियोस् । एउटा यथार्थ हो– छिटो निर्वाचन भयो भने त्यो काँग्रेसका लागि अनुकूल हुन्छ । तर, पाँचवर्र्षे आवधिक निर्वाचन भयो भने त्यस्तो अनुकूलता नहुन पनि सक्छ । सायद, त्यही बुझेर देउवाको जोड शीघ्र निर्वाचनमा देखिन्छ ।
को सत्तारोहण हुने, कसलाई सत्ताच्यूत गर्ने, कसकाविरुद्ध कसले गठबन्धन बनाउने, कसलाई एक्लो पार्ने ? यी सबै राजनीतिमा हुन्छन् नै । तर, यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय नेताहरूबीच एक–अर्काको कटाक्षको होइन, उहाँहरूले एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने राजनीतिक अराजनीतिक भाषाको पनि होइन । किनकि एकछिन अघि सत्तोसराप गरेको नेतासँग एकछिनपछि सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने नेपाली राजनीतिक संस्कृति नै छ । यो एकप्रकारले ठिकै पनि हो, किनकि स्थायी शत्रुता र मित्रताभन्दा मुद्दा र अवस्थाअनुसार परिवर्तनशील सम्बन्ध उपयुक्त हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दल र तिनका शीर्षनेतृत्वमा मित्रताका लागि लचकता प्रदर्शन गर्ने चरित्र पनि छ ।
मूल मुद्दा सामान्य कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र नागरिकमाथिको गम्भीर आक्षेपको हो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र गगन थापाहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली मन नपर्न सक्छ । तर, त्यसको अर्थ ओलीलाई मान्ने कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र नेपाली नागरिकमाथि ‘दास, हुक्के, बैठके’जस्ता गालीगलौजका शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यसैलाई ठीक उल्टो पारेर उहाँहरूका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र नागरिकलाई ‘दास, हुक्के, बैठके, चम्चे’ भन्दा हुन्छ त ? हुँदैन । माधव नेपालको विराटनगर वाणीलाई हेरौँ । उहाँ भन्नुहुन्छ– विधानविपरीत काम गर्नेलाई साथ र समर्थन दिने दास हुन् । हामी दास होइनौँ ।’ पार्टी अध्यक्ष ओलीले विधानविपरीत काम गरेको भए त्यसलाई चुनौती दिने वैधानिक प्रक्रिया पनि त्यही विधानले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । तर, त्यो बाटो माधव समूहले अपनाएको देखिँदैन । एमाले ब्युँतिएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बहुमतको निर्णयबाट माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमै रहनुभएका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो । एमाले विस्तारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो उपयुक्त कदम थियो । अब यहाँ कहाँ मालिक र कहाँ दासको प्रश्न आउँछ ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने सबै दास हुन् भन्ने माधव नेपालको अभिव्यक्ति ओलीको रिसले गाउँस्तरसम्मका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तामाथिको अपमान हो । एकातिर, ओली समर्थकलाई उहाँ दासको संज्ञा दिनुहुन्छ, अर्कातिर हिजो उहाँसँग रहेका सांसद र नेताहरू उहाँलाई छाडी ओलीकै साथमा पुग्नुभएको छ । शेरबहादुर तामाङ, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेललगायतका सांसद र केही केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई किन साथ दिएनन् ? किन ओली शिविरमा प्रवेश गरे भन्ने मूल्याङ्कन माधवले गर्नु राम्रो ।
ओली पक्षमा लागेका नेता र कार्यकर्ता, उहाँलाई समर्थन गर्ने नेपाली नागरिक सबै दास हुन् भन्ने माधव नेपाललाई १५ वर्ष पार्टी प्रमुख बनाएका नेता कार्यकर्ता पनि उहाँका दास थिए ? वा निर्वाचनबाट पराजित हुँदा प्रधानमन्त्री बनाउने संसद् र प्रधानमन्त्री मान्ने नागरिक उहाँका दास थिए ? माधव नेपालजस्तो वरिष्ठ नेताले यति किन नबुझ्नुभएको होला ? त्यसो भए किन धेरै दासको निर्माणमा लाग्नुभएको त ?
ओलीविरुद्धको अभिव्यक्तिकै विगत र वर्तमान हेर्दा, प्रचण्ड पनि कम हुनुहुन्न तर पनि उहाँले माधवजस्तै ढङ्गमा मालिक र दासको प्रयोग बारम्बार गरेको सुनिएको छैन । ओलीलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने राजनीतिक रूपमा विरोध गर्दा हुन्छ तर ओली समर्थकलाई किन गाली गर्नुहुन्छ ?
देशका युवादेखि प्रबुद्ध नागरिकसम्ममा ओलीको लोकप्रियता पहिलाभन्दा बढ्दो छ । विकास निर्माणको सोच र कार्यान्वयनदेखि राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्वसम्मका कारण ओली कार्यकालमा केही इतिहास निर्माण भएका छन्, जोकसैले चाहँदैमा तोडिँदैन । ओलीको वर्तमानकै निष्क्रियताले एमालेमाथि धावा बोल्न पाइन्छ भनेर विश्लेषण गरी विरोधमा उत्रने समूह पनि छ । जुन सरकार कर्मकाण्डीमात्र हुन्छ, जुन सरकार आवधिक निर्वाचन पर्खेरमात्र बस्छ, त्यसको विरोध हुँदैन । विरोध त्यसको हुन्छ, जसले केही नयाँ गर्न प्रयास गर्छ, क्रमभङ्गताको आरम्भ गर्छ । दुनियाँलाई थाहा छ– झगडा सत्ताको हो, विचारको होइन । देशनिर्माणको होइन, सत्ता नियन्त्रणको हो । प्रचण्डसँगको गठजोठ बाध्यतावश टुटेपछिको छटपटाहट आफ्नै कार्यकर्ता र नागरिकलाई गाली गरेर किन पोख्नु ? सके ओलीसँगै लड्नु, नसक्ने भए पनि ओलीलाई मान्नेको अपमान नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
पेशागत सीप तालिम नलिई ८० हजारले पाए श्रम स्वीकृति
कक्षा १२ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट